ကိတ်မုန့် အလှဆင်ပစ္စည်းများ – Thet Nandar
Posted on February 7, 2013 May 14, 2018 by Thet Nandar
အပေါ်က ဓာတ်ပုံက ကိတ်မုန့်မှာ အလှဆင်တဲ့ ပန်းပွင့်၊ ပုလဲလုံး၊ အဆံလေးတွေ ..
( အရောင်စုံ ရှိတယ်။ ပုလဲလုံး အမဲတွေရော၊ အဖြူတွေရော၊ ပန်းပွင့်ပုံလည်း အရောင်စုံ ရှိတယ်။ )
နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်လေးတွေလည်း ရှိတယ်။ သမီး အကြိုက် Princess .. crown ပုံလေးတွေ .. cup cake ဖြစ်ဖြစ် .. ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ အလှဆင်လို့ ရတယ်။
ခရမ်ဗူး နဲ့ .. အရောင်ဆိုးဆေး
ခရမ်ညစ်တာ .. အပို ဒီဇိုင်း ၄ ခု ပါတယ်။ ပြန်ဆေးပီး သုံးလို့ရတယ်။ ပလပ်စတစ်နဲ့ ခရမ်ညစ်တဲ့အိတ်လည်း ရှိတယ်။ တခါသုံး အိတ်။
ဒီဘက်က ဖယောင်းတိုင် .. ဒီဘက်က ချောကလက်ဆန်လေးတွေ
ဖယောင်းတိုင် ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး ..
Happy Birthday စာတန်း၊ ကြယ်ပုံ၊ ပန်းပုံ၊ ဖယောင်းတိုင်က အတွန့်၊ အကောက်၊ အဖြောင့် ဒီဇိုင်းအစုံ
မွေးနေ့ ဂဏာန်း ဖယောင်းတိုင်များလည်း ရှိတယ်။
ဒါက Ice Cream Cake
မွေးနေ့ ရေခဲမုန့် ကိတ် လည်း ရှိသေးတယ်။
ဒါက ရေခဲတုံးခွက်လိုမျိုးပဲ .. ခရမ်တွေကို အဲဒီ ခွက်ထဲမှာ ထည့် ပီးတော့ ခဲ .. ပီးမှ ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ ဒီဇိုင်း လိုက်ဆင်တာပါ။
ခရမ်က ခဲသွားတော့မှ ခွါလိုက်လို့ ရတယ်လေ .. ရေခဲတုံး ( သို့မဟုတ် ) ကျောက်ကျော ခဲ သလိုမျိုး …( ဒီဇိုင်း အစုံ ရှိတယ်။ )
စားလို့ရတဲ့ သကြား စာရွက်လည်း ရှိတယ်။ ကိတ်မုန့်မှာ အရောင်နဲ့ ကတ်တဲ့ စာရွက်လည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒီ သကြား စာရွက်က ဒီဇိုင်း အစုံပဲ .. အဲဒီ စာရွက်ကို ကိတ်မုန့်မှာ ကပ်ချလိုက်ပီး ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်လိုက်ရုံပဲ ..
ကိတ်မုန့်ကို အသေးစိတ် ပုံဖော်တဲ့ ကိရိယာများ
ကိတ်မုန့် ခရမ်ကို ဒလိမ့်တုံးနဲ့ ဆွဲလိမ့်တဲ့အခါ အမျိုးမျိုး . ဒီဇိုင်း ဒလိမ့်တုံးများ
ဒလိမ့်တုံး ရိုလာ ( သို့မဟုတ် ) ကိတ်မုန့် ဓါးဖြင့် ခရမ်တွေကို ညှိ ပီးမှ ခရမ်တွေကို အအေးခံရင် ကိတ်မုန့် ခရမ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ညီညီညာညာ ရှိပါတယ်။
( ကိုယ်က ကိတ်မုန့်ပေါ်ကို ချောကလက်အရည် လောင်းချပီး ရေခဲသေတာထဲ ထည့်ခဲလိုက်တာပဲ .. ကိတ်မုန့် လည်း အရောင် လက်လက်နဲ့ ချောကလက် အရောင် တောက်ပြောင်နေတာပဲ )
သမီးကတော့ ကိတ် ခရမ် သုပ်ပီးရင် .. သူက စကူထူ ဖြင့် ညှိ ပေးလိုက်ရင် ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ ခရမ်တွေ ညီညီညာညာ ဖြစ်သွားပါတယ်။
သကြား စာရွက်ကို ပန်းပုံ ဖြတ်တဲ့ ဖြတ်စက် ကော်ခွက်၊ ဒီဘက်က ကတ်ကြေး
ကိတ်မုန့် အောက်မှာ အလှ ခံတဲ့ စာရွက် နှင့် ကိတ်မုန့် ဖုတ်ပီးရင် ကိတ်မုန့် ဆိုင်က အောက်မှာ အလူမီနီယံ အပြား ကတ်ထူ ခံပေးတတ်ပါတယ်။
ကိတ်မုန့် အောက်ခံ အပြား နှင့် အလှခင်းတဲ့ အ၀ိုင်းလေးများ
50% ဈေးချထားလို့ ၀ယ်လာတယ်။ ကိုကာကိုလာ အရည်ရောပီး ချောကလက် ကိတ်မုန့် ဖုတ်တဲ့ အထုပ်
ကြက်ဥပြုပ် အကာထဲမှာ အနှစ်တွေကို ခြေပီး အပေါ်ကနေ ပန်းပုံစံ ခရမ် ညစ်ထည့်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်း
Categories: Cake and Cookie